Generator Vaz 2108: ukufakwa, uxhumano, umdwebo
Kuyini generator Vaz 2108 nalapho efakwe, wonke umuntu uyazi umnikazi wale moto. Kodwa-ke akunakwenzeka ukuba bakwazi ukutshela zonke izimiso ku esebenza kuwo, kanye uhlu zonke izakhi eziyinhloko zazo liqukethe. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-generator nomshini elula DC motor kufana kakhulu design. Hhayi nje efanayo, futhi amadivayisi ezifanayo. Umahluko owokuthi ukuthi omunye ugesi, kanti eyesibili - ibusa. Kodwa lo mehluko akugcini, kubalulekile ukuba sihlole kabanzi generator ukuze uwathole wonke.
Rotor kanye kokugwingciza yayo
Singasho ukuthi ngesisekelo generator - kuba Rotor yayo. It has a ikhoyili zethusi wire. On Rotor emazombezombe kuyinto DC voltage kusukela ibhethri. Umgomo we operation kwanoma iyiphi isethi Generating wukuthi kubalulekile ukuba khona izingxenye ezimbili eziyinhloko - tenhlangano ensimini njalo kazibuthe. Ungakwazi kanjani yokugcina ukwakha? Noma ngokufaka uzibuthe onamandla noma ngocingo nilimaza phezu wesifunda kazibuthe. Okokuqala samuntu ubalekela ngokushesha njengoba izindleko, isibonelo neodymium odonsa, mahle le njongo, iphakeme kakhulu. Isikimu Vaz generator 2108 kufaka emazombezombe ku Rotor.
Ishibhile futhi kulula ukuba sifeze ematfuba emazombezombe phezu kukazibuthe core zethusi ikhebula. Into wukuthi uma voltage lisetshenziswa ikhoyili ekhiqizwa kazibuthe. Futhi mkhulu, ayanda amandla emkhakheni. Ngakho-ke, ngokwandisa voltage ukunikezela izimfanelo ensimini ukugqanyiswa. Kufanele kuqashelwe ukuthi wire nethusi izikhathi eziningi ezishibhile odonsa neodymium, futhi ukuphila inkonzo yayo iphakeme kakhulu. Amandla ibangela umonakalo kuyinto cishe engenakwenzeka, kanye lokukhanda. I last - ngaphandle anolaka handling ngesikhathi nokulungisa.
I stator emazombezombe
Generator Vaz 2108 has a stator kunalokho omkhulu emazombezombe, ngoba isebenzisa ezinkulu cross-section wire. Ngosizo lwakhe luba ugesi runningaway. I ngezintambo nilimaza nombala phezu bonke ubuso engaphakathi stator endaweni enikeziwe ngokukhethekile le njongo, ekhosombeni e ijoka. Kufanele futhi sikhulume mayelana yokugcina. Ingxenye phakathi stator generator siqukethe iqoqo izingcwecwe zensimbi ezilula, uvalwe yayicindezele nomunye. Ngokuvamile, basuke Bilisa ngaphandle, funa kube khona ukwahlukana.
Empeleni, Yebo, stator emazombezombe we alternator yezimoto inezingxenye ezintathu alinganayo ngokuphelele. Isizathu salokhu sici ugesi inqubo Generating - ukuthola kudinga ezintathu okhombisa AC voltage, kamuva uzobe waqonda. Kodwa le nqubo kuzoxoxwa ngezansi. Ngamanye amazwi, motor generator stator efana isici esifanayo motor lokungeniswa. Ngisho kwakwakhe senziwa emazombezombe iphethini ncamashi. Ixhuma generator Vaz 2108, noma kunalokho, ayo izinkampani senziwe "inkanyezi."
Ofeleba kanye amabombo
Nangemuva nesembozo, okuyinto Banamathele stator izindlu, amabombo ayatholakala. Ziyakwazi ezidingekile ukuqinisekisa ukusebenza kuhle kwe-generator. Ngosizo lwabo, Rotor uzungeza ngokukhululekile, kodwa okubaluleke kakhulu - ke senziwa ngokuqinile ngokuvumelana umgwaqo eksisi ujikeleza. Ngenxa yalokho, ijoka Rotor Akunamatheli stator emazombezombe ngesikhatsi kokuhlinzwa. Ofeleba zenziwa metal ukukhanya - aluminium, okhona njengamanje owenza umsebenzi eziningana.
Okokuqala, i-aluminiyamu ubamba kahle futhi ukunika off ukushisa. A generator Vaz 2108 kushisa kakhulu ngesikhatsi kokuhlinzwa. Okwesibili, i-aluminiyamu ulula isisindo ukuthi kusiza wonke isakhiwo. Ngaphezu kwalokho, ugesi, phambi ingxenye yayo, i impeller is agibele amahhashi. Phakathi ukuzungeza Rotor lenza ukugeleza komoya ukuthi ungena bezinhlamvu mshini. Ngenxa yalokhu, kukhona indlu eyengeziwe.
Isetshenziselwa ukushayela ibhande generator Vaz 2108. Kumele kuqashelwe ukuthi le imodeli wenziwa kuphela imoto umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli uhlelo umjovo, ngakho ibhande ukuthi agibele amahhashi kwalo nhlonhlo. On izimoto entsha ye umndeni lesishiyagalolunye kuya kweleshumi, uhlelo fuel lapho uhlobo injector, wafaka ibhande ukuhluka. Kufana eyodwa okuyinto eliqhutshwa washi, isikhathi siboniswa, kodwa esikhundleni amazinyo ngaphakathi ukusakaza yakhe.
Kuyinto yile divayisi kwenzeka AC ukuze DC ukuguqulwa. Uyazi ukuthi kukhona plus futhi lokususa kule moto isimiso sikagesi. Ezinye Ingase isho nokusho ukuthi Vaz 2108 generator ukhiqiza volts 12. Nokho, ngokushesha kuzoba umuntu uzokwazi ukucacisa kancane yitjho ukuthi kwamanye izimoto, on-ebhodini ukunikezela 24 volts. Kodwa eights Yiqiniso, 12 kuphela, ukuthi kwanele. Ngakho, e-on-ebhodini inethiwekhi, plus futhi lokususa, kanye okukhipha generator emazombezombe izigaba ezintathu. Yini okumelwe uyenze?
Ngenxa yale njongo futhi lisetshenziswa rectifier iyunithi. Siqukethe amabhangqa amathathu Semiconductor diodes. It kuvela ukuthi diodes ezimbili alungise isigaba ngasinye ivela stator emazombezombe. Futhi okukhiphayo zedivayisi emva ukuguqulwa uthole voltage njalo. Futhi Vaz 2108 generator isifunda sihlanganisa iSifundazwe capacitor okuthela ezinqunyiwe zonke AC ezisele ngemuva rectifier iyunithi. Kodwa izinkinga enye - kuncike ekutheni ijubane Rotor, futhi kukhona ushintsho lo voltage okukhiphayo. Kanjani ayibulale?
Isethi inkinga, kufanele-ke ixazululwe. Futhi ukuze kube lula, uma kuphela ekulinganiseni voltage, okuyinto bephethe Rotor generator emazombezombe. Into wukuthi manje ukuthi kungakhathaliseki ukuthi okukhiphayo voltage amandla intando ambalwa imithombo - generator nebhethri, kuya excitation emazombezombe (Rotor) ihlinzekwa esitebeleni kuphela. On Vaz voltage generator 2108 imayelana 12,5-13,8 volts. Ngenxa yalokho, amandla kazibuthe uyohlale okufanayo, kungakhathaliseki isivinini Rotor. Futhi uma kunjalo, khona-ke stator emazombezombe voltage beyoba esitebeleni.
Njengoba generator ahlukanisa
Ukuze bamelele generator Vaz 2108 lidlule ngokushesha ngangokunokwenzeka, udinga ukuba singangeni ngaphakathi igrisi. Isizathu ngoba kubekwé isidingo yayo itholakala ubakaki aphansi. Ibhawudo itholakala ezingeni we sump injini. Ngeshwa, hhayi njalo ngemoto khona mudguard. Futhi ngisho noma kuwufanele, umswakama noma uthuli uthole joint threaded. Ngakho-ke, kufanele kube ngobuningi yokuphatha eyenza umuntu acabange eseZwini okugcotshwayo ke ake ume okungenani isigamu sehora. Kulokhu kwanele sifakwe emanzini kwaba zonke nokugqwala nokungcola kuchungechunge.
Uma ungazange wathwebula generator, kungcono ukuba baziphathe amafutha efanayo futhi nut phezulu. Ngemva ukuqeqeshwa kancane wriggle uvela phezulu stud nut ngokuphelele. Esebenzisa cap nezisekelo unscrews ephansi umshudo ukhiye. Kungcono ukuba bafeze lo msebenzi kusukela phansi imoto, ngakho zibelula ukuba. Kungenzeka ukuthi ibhawudo uyaphuma ezihambisanayo. Ukuze donsa, udinga ukusebenzisa imishudo noma izikopelo ubukhulu mncane. Qaphela ukuthi zonke lezi kumele kwenziwe nge ibhethri inqanyuliwe. Zonke izintambo ukuthi ukuxhuma generator labetibambile Vaz 2108, iyadingeka futhi ukuxhuma.
Indlela ukufaka generator entsha
Ukufaka oscillator entsha e-oda reverse. Thatha ukubhekisisa kahle isimo umshudo aphansi. Uma ike ezilimele izindikimba, kungcono esikhundleni sako. Wena ubuye kuyoba lula ukuba afeze ukulungisa generator kwalokho. Ngokukhethekile ngesikhathi ukufakwa, ukukhokha ukungezwani ibhande. Uma akwanele ukoma ke ibhethri lakho ayiqondakali icala. Futhi uma ukungezwani okuningi ibhande, kuzoba ukubhujiswa sihlobene e esembozweni. Ngenxa yalokho, uthola i ezingemnandi encimfelwayo umsindo ngenkathi injini iyasebenza. Futhi isizathu ukuthi - ukubonakala bedlala amabombo. Ukufakwa generator ngesikhathi umkhonyovu e 2108 kumele kwenziwe ukuze azange abe ngisho ukungapheleli kancane.
Ekuphetheni, kufanele kuphawulwe ukuthi inkonzo ngesikhathi esifanele kuphela izonikeza operation evamile nohlalisekile isethi generator. Buyisela Umlawuli voltage, okuyinto phezu eights zenziwe eyodwa nge emabhulashini, udinga isikhathi wena. Akubalulekile ukulinda isikhathi lapho amandla ehluleka le Windings Rotor ngenxa ukubhujiswa okuphelele kwalelizwe emabhulashini. Kuphela ngaphansi kwalezi zimo, generator Vaz 2108 ngeke ahluleke futhi njalo uzokhipha ukushaja evamile ibhethri.
"Ferrari 458" - ukuphelela elilandelayo kusuka emhlabeni inkampani abadumile Italy
Car ukulungisa izandla zabo: esikhundleni crankshaft uwoyela uphawu
Zonke-wheel izimoto drive - anda induduzo futhi ngakhula ukusetshenziswa?
Design kanye Ukucaciswa "Volkswagen Passat" isizukulwane 6th
Isihluthulelo ingxenye imoto - ikhoyili ukuthungela
ZMZ-409 injini: Ukucaciswa, ukukhanda, izibuyekezo
Indlela ukususa "Baidu" ngekhompyutha? Indlela ukususa Baidu: imininingwane ewusizo
Umzimba zokwelapha e hernia umgogodla: isakhiwo umzimba
Compote of Antonovka ebusika - supply amavithamini wonke umndeni
Succo isivakashi izindlu eduze kolwandle
Indlela sculpt izibalo kusukela mastic ngezandla zakhe ukuhlobisa ikhekhe
Izipikha Coaxial - Ingabe lo izinqumo ezinhle?
Ezinye izincomo mayelana nendlela ukugeza igazi izingubo zakhe
Nestling undlunkulu: indlela ukondla inyoni?
Olwandle ejulile - emhlabeni hhayi kuphela
U-Alexey Frolov: biography nobuciko
Dream ncwadi. Kungani iphupho ijazi noboya
Cornice amawindi bay - izinhlobo kanye nezinzuzo